Xogaga Al-shabaab Ayaa waxa Ay Gooraceen rag dhalinyara ah – STAR FM SOMALIA
Xogaga Al-shabaab Ayaa waxa Ay Gooraceen rag dhalinyara ah
Wararka ka imaanaya deegaanka Yiblane oo ku yaal xadka kala qeybiya labada gobol ee Sh/dhexe iyo Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan ururka Al shabaab ay seddax ruux oo dhalinyara ah ku gowraceen deegaanka Yiblane oo ku yaal galbeedka deegaanka fiidoow ee gobolka shabeellaha dhexe .
Ururka Alshabaab ayaa ku tilmaamay saddexdan nine e edhalinyarada ah in ay ka tirsanaayeen ciidamada Milatariga ee dowlada ayna u basaasi jireen.
Hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegay in dhalinyaradan la dilay aysan wax lug ah ku lahayn dowladda ayna ahaayeen dad laga soo qabtay deegaanka Buq Aqable oo ka mid ah gobolka Hiiraan. Labo kamid ah wiilasha dhalinyarada ah ee la dilay ayaa labo ka mid ah waxa ay ahaayeen walaalo.
Ururka Alshabaab ayaa hore waxa ay uga fuliyeen deegaano kamid ah gobolada dalka falal qoorgoyn ah iyadoo deegaanada laga fuliyo falalkaasina ay badankood yihiin kuwo ay ururka Alshabaab gacanta ku hayaan.
Magaalada Jalalaqsi Ee Gobalaka Hiiraan Waxaa Maanta Gaaray Taliyaha Guud Ee Ciidanka Jabuuti
Wasaarada waxbarashada Oo Soo Bandhigtay Shahaado Cusub Oo dugsiga Sare Ah